Maty ny mpanolotsaina teknika ankafizin'i Steve Jobs | Avy amin'ny mac aho
Maty ny mpanolotsaina teknolojia ankafizin'i Steve Jobs
Misaona ao Cupertino izy ireo anio ary maty i Bill Campbell, mpanolotsaina teknolojia ankafizin'i Steve Jobs. Campbell dia mpikambana ao amin'ny birao Apple ary natokana hanoro hevitra ireo orinasan'ny Silicon Valley marobe izay Apple. Rehefa nandeha ny fotoana dia nanomboka niditra tao amin'ny laharan'ny Apple izy ary niara-tanana tamin'i Steve Jobs.
Nodimandry tamin'ny faha-75 taonany izy noho ny aretina nahazo an'i Steve Jobs, voan'ny homamiadana. Tsy mahagaga raha any Cupertino dia misy fihetsika na fivorian'ny mpiasa ho fankasitrahana ny asany an-taonany maro.
Campbell dia niditra tao amin'ny Apple tamin'ny 1983 ho filoha lefitry ny marketing. Niala izy taorian'ny taona vitsivitsy ary lasa toerana tena lehibe tao Intuit. Taona maro taty aoriana, rehefa niverina tany Apple i Steve Jobs tamin'ny 1997 dia niverina tany aminy i Campbell. Rehefa lasa mpikambana ao amin'ny birao Apple dia nandao ny filankevi-pitantanana i 2014 tamin'ny Campbell. Nandritra ny taona faramparany niainany tany Apple dia nanoro hevitra an'i Eric Schmidt an'i Google momba ny fomba fitantanana tsara kokoa ny orinasa izy.
Ankoatry ny maha-sain-draharaha mamiratra azy dia mpanazatra baolina kitra ihany koa i Campbell tao amin'ny University of Columbia, izay toerana misy azy nahazo ny anaram-bosotra hoe "The Coach" izy. Hihaino tsara ny hetsika rehetra ataon'ny Apple amin'ity lafiny ity izahay ary azonay antoka fa ny birao foibe Apple dia hanokana minitra vitsy ho fahatsiarovana an'ity fahitana iray lehibe momba ny orinasa ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Maty ny mpanolotsaina teknolojia ankafizin'i Steve Jobs
Apple dia manokatra fisoratana anarana amin'ny fisarihana tapakila ho an'ny WWDC 2016